छोरालालाइ बुहारीले प्रश्न गरिन, तपाईले आफ्नो लागि ल्याउनु भएको हो कि बुवाको लागि ? – Namaste Host
April 8, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on छोरालालाइ बुहारीले प्रश्न गरिन, तपाईले आफ्नो लागि ल्याउनु भएको हो कि बुवाको लागि ?
उन्नाइस वर्षीया युवतीलाई कर णी गर्ने युवालाई जिल्ला अदालत बागलुङले सात वर्ष कैद सजाय फैसला गरेको छ । बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका–२ का २१ वर्षीय रेशम वनलाई जिल्ला न्यायाधीश वासुदेव न्यौपानेको बुधबारको इजालासले कसुर ठहर गर्दै सात वर्ष कैद सजाय फैसला गरेको हो ।
कैदसँगै वनले पीडित युवतीलाई रु ८० हजार रकम क्ष’तिपूर्तिसमेत दिनुपर्ने फैसला गरेको जिल्ला अदालत बागलुङका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।
विसं २०७७ असार १७ गते ती युवतीलाई कर णी गरेको अरोपमा वनलाई प्रहरीले असार १८ गते पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत साउन ११ गते जिल्ला अदालत बागलुङमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । वन जिल्ला अदालत बागलुङको साउन १२ गतेको आदेशले हालसम्म जिल्ला कारागार बागलुङमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका थिए ।
तलको भिडियोमा ससुरा र बुहारीको कर णीको घटनाको युवतीले दिएको बयान राखिएको छ हेर्नुहोस भिडियोमा
यो पनि : बाँदरबाट अन्नबाली जोगाउने नयाँ काइदा
जिल्लाको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले बाँदरले अन्नबाली खाएर सास्ती दिन थालेपछि बाँदर धपाउन नयाँ विधि अपनाएको छ । वन जङ्गलमा पर्याप्त आहारा नहुँदा कृषकले खेतबारीमा लगाएको अन्नबाली बाँदरबाट जोगाउन नसकेपछि पालिकाले नयाँ जुक्ति निकालेको हो ।
बाँदरले लगाएको खेती मात्रै नभई घरको कौशीमा राखेको अन्नबालीसमेत खाएर नोक्सान पु¥याउन थालेपछि शुक्लागण्डकी नगरपालिका–७ वडाले त्यस क्षेत्रका कृषकलाई अदुवा र बेसारको बीउ वितरण गरेको छ । दिनहुँ बाँदरको समस्याबाट देशभरका कृषक चिन्तित छन् । उक्त समस्या कम गर्दै उत्पादन बढाउन र कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले अदुवा र बेसारको बीउ वितरण गरिएको वडाध्यक्ष रामबहादुर थापा क्षेत्रीले बताउनुभयो ।
कृषकलाई ३३५ किलो बेसार र ५० किलो अदुवाको बीउ वितरण गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “वडाको अर्चले र न्यारथुमका विपन्न ३५ कृषकलाई भने ५० प्रतिशत अनुदानमा बीउ वितरण गरिएको छ ।” खेत बारीमा लगाएको खेतीबाली बाँदरले सखाप पार्ने भएकाले वैकल्पिक खेती गर्न बीउ वितरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
बेसार र अदुवा बाँदरले खाँदैन । उहाँले भन्नुभयो, “उत्पादन पनि राम्रो हुने भएकाले बीउ वितरण गरेका हौँ ।” बाँदरले क्षति पु¥याउने खेतबारीमा अदुवा र बेसार खेती प्रभावकारी हुने देखिएकाले कृषकको माग अनुरूप बीउ वितरण गरिएको सो वडा कार्यालयले जनाएको छ ।
कृषकको आवश्यकता र मागअनुसार वितरण गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “कृषकको चासो देखाएर लाग्न आग्रह गरेका छौँ, बीउको उचित सदुपयोग भए÷नभएको समय समयमा अनुगमन गरिनेछ ।” वडाले अनुदानमा बीउ उपलब्ध गराउँदा राहत मिलेको स्थानीय सोमबहादुर कुँवरले बताउनुभयो ।
मकै र कोदो लगाउँदा सबै बाँदरले खाएर घरमा भित्र्याउन नपाएको गुनासो पोख्दै अन्नबालीको अलवा अब अदुवा र बेसार उत्पादन गरेर मुनाफा लिने गरी खेती गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो ।
ज्याला मजदूरी गरी खाने परिवारमा एकदुई जना मानिस त खेती कुर्नै पर्ने भएकोले वैकल्पीक खेतीको रुपमा अदुवार बेसार खेती उपयुक्त रहेको उहाँले बताउनुभयो । वडाले बाँदरबाट प्रभावित कृषकलाई राहत दिन चालु आर्थिक वर्षमा रु एक लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । शुक्लागण्ड
रोमाञ्चक पर्यटकीय गन्तव्य जहाँ संसारका पर्यटक पुग्न मरिहत्ते गर्छन्, कति पर्छ एकरात बिताउन ?
गायिका टिका सानुको गुरु खिम बिकलाइ आयो यति धेरै सहयोग , धन्यबाद प्रकट गर्दै खिम
January 23, 2021 January 23, 2021 Bijay Lama
खुसिको खबर: नेपालमै थाल्यो चौधरी नफाउन्डेसनले ठुलो काम, को’रोनाले आजित नेपालीलाई यस्तो खुशी ! (भिडियो हेर्नुहोस्)